processeur [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/a/a5e86c34e30e74378743676f9e50fb2c.xhtml failed
Ny processeur na CPU (Central Processor Unit) no singa manao ny kajy rehetra, kajy satria fifandimbiasana isa 1 sy 0 no iasan’ny solosaina na sary sy hira aza no alefa aminy. Izy izany no tena mitondra ny tanjaky ny solosaina. Misy karazany maro ny CPU, fa anankiroa izay mahazatra no hasiana resaka, izay samy IBM daholo no loharano nipoirany: ny PowerPC sy ny x86.
Io no processeur hita amin’ny milina Macintosh amin’izao fotoana, ary hita ihany koa amin’ireo vata filalaovana toy ny xbox. Mampiasa instructions antsoina hoe RISC izy, ary manana firafitra manokana. Tsy dia haingana ny GHz-ny fa na izany aza mahatoraka ny sasany ny fahombiazany. IBM sy Motorola no tena mpamokatra azy, ary arakaraka ny fandrosoan’ny teknolojia miasa aminy dia ahitana ny G3, G4 ary G5 (farany indrindra). Marihina fa nataon’i IBM open source ny firafitra sy programan’ny PowerPC.
Ny processeur Cell no vokatra farany amin’ny powerpc, izay mihodina amin’ny hafaingana 4 GHz amin’izao. Mety ho avo folo heny amin’ny tanjak’ireo processeurs x86 amin’izao fotoana izao ny tanjany, ary antenain’ny mpamorona azy hanana hoavy mamiratra.
Ao anatiny daholo ireo processeur lazaina ho compatible IBM-PC, mampiasa instructions CISC. Io izany no processeur ampiasain’ny solosaina antsointsika amin’ny andavanandro hoe PC. Intel sy AMD no orinasa tena mpamokatra azy mifaninana amin’ny tsena amin’izao izay samy mamoaka gamme-na processeurs:
- ambony: matanjaka fa lafo (Pentium ny an’i Intel ary Athlon ny an’i Amd)
- sy ambany: maivamaivana fa mora vidy (Celeron ny an’i Intel ary Duron sy Sempron ny an’i Amd)
Sakamalao sy havozo ireo ka samy manana ny hanitra ho azy. Sarotra ny mampitovy processeurs anankiroa amin’izao satria tsy voatery mitovy ny firafitra sy ny programa any anatiny na dia mitovy izao aza ny GHz-ny, afa-tsy ny mampifanandrina ihany. Tsara aloha ny mijery an’ireny vala mampiseho fampitahana ireny (comparatifs) mba hahafahana misafidy izay processeur hovidiana arakaraka ny hampiasana azy. Na izany aza ireto misy zavatra vitsivitsy ahafahana manao fampitahana tsotsotra:
Frequence d’horloge: izay refesina amin’ny MHz (megahertz) na GHz (gigahertz). (1 GHz = 1000 MHz). Arakaraka ny mahalehibe an’io no mampahaingana ny processeur.
Memoire cache: mitovitovy asa amin’ny RAM ihany izy, izany hoe hametrahana vonjimaika an’ireo donnees, saingy ny tombony dia izy ao anatin’ny processeur. Arakaraka ny maha-lehibe azy no ahavitan’ny processeur kajy mavesatra haingana kokoa. Zava-dehibe koa io, satria io ohatra no tena tsy itovizan’ny celeron sy ny pentium.
processeur.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43